Bafuna eyobuholi beminyaka eyishumi | IOL Isolezwe
Bafuna eyobuholi beminyaka eyishumi
Isolezwe / 14 December 2012, 3:50pm /
SIZOSUSA inkulumo mpikiswano eshisa phansi engqungqutheleni ka-53 ye-African National Congress (ANC), eqala ngeSonto eMangaung, isiphakamiso sesifundazwe iWestern Cape, sokuthi ubuholi obuzokhethwa bube yisigungu esiphezulu buhlale iminyaka eyishumi esikhundleni kweyisihlanu.
USihlalo kaKhongolose kulesi sifundazwe uMnuz Marius Fransman uthi bazosiphusha lesi siphakamiso kodwa ngeke siqale kulobu buholi obuzokhethwa manje. “Uma ubheka indlela izwe okumele lithuthuke ngayo uyabona ukuthi kuncike kakhulu eqenjini elibusayo uKhongolose. Okwenzekayo njengamanje wukuthi kukhethwa ubuholi bube nemibono emihle, buyifake kuhulumeni kuthathe isikhathi kulandelwa imigomo nemithetho ukuthi kuphasiswa leyo migomo, buyaqambe buyaphaphama ubuholi sekusele unyaka owodwa ukuthi benze umsebenzi. Lokhu sizokufaka ngaphansi kohlu lokubuyekezwa komthethosisekelo wombutho ngoba kungathinta nomthethosisekelo wezwe,” kuchaza uFransman ohlelweni lomsakazo wakwaSABC.
Umhlaziyi wezombusazwe uMnuz Bhekisisa Mncube, uthi lokhu kubukeka kuyiphupho elihle eminyakeni ezayo kodwa lesi siphakamiso ngeke silibone elidlalayo kule ngqungquthela.
“Uzokhumbula ukuthi iWestern Cape ihambisana nedlanzana eleseka ukushintshwa kobuholi futhi lesi siphakamiso asizange sifakwe nasengqungqutheleni yemigomo ngoJuni nonyaka, nokuzokwenza sikhahlelwe ekuseni eMangaung. Angisiboni sinikezwa ithuba ikakhulukazi njengoba sikubeka kucace ukuthi asifuni ukuthi kuqale ukusebenza kwaso ngalobu buholi. Uma ubheka iziphakamiso ezinhle njengalezi eziqala zizinhle zigcine sezephula inqubo yentando yabantu abaholi bagcine sebengondlovu kayiphikiswa ngoba beqhoshe ngokuhlala isikhathi eside ezikhundleni,” kusho uMncube.
Ephawula ngezinye iziphakamiso ezingase zishise kule ngqungquthela uMncube uthe aziziningi iziphakamiso ezizoshiya abantu bebambe ongezansi ngoba okuningi kwadlulwa kukho kwacwaningwa eMidrand. Uthe abantu abazolala ubuthongo emuva kwale ngqungquthela ngosomabhizinisi ikakhulukazi abasemkhakheni wezimayini ngoba le ngqungquthela izokhipha isiqiniseko sokuthi izimayini ngeke zifakwe ngaphansi kukahulumeni. “Uhlaka olwalufuqa lo mgomo weNationalisation of Mines, alusenamandla selwenziwa izimungulu. Kule ngqungquthela luzobe lumelwe yizithunywa ezingu-45 kuphela nokuwuphiko lwentsha lukaKhongolose. Osekusele manje wukuthi ingqungquthela inikeze umgomo ocacile wokufukula umnotho nozonikeza ithemba kubatshali zimali bakwamanye amazwe,” kuchaza uMncube.
Olunye udaba olungase lufe kule ngqungquthela olwake lwashisa ngoJuni olwesiphakamiso ebesiphushwa yiKwaZulu-Natal, sokuthi kuncishiswe amalungu okwengeza esigungwini esiphezulu sisuke ku-80 sehlele ku-60 khona kungene abaholi abanohlonze nabaqotho kuphela kulesi sigungu. IKwaZulu-Natal, isiyehlele ngezansi kulesi siphakamiso emuva kokubonisana nezinye izifundazwe.
“Lesi siphakamiso besivele singadala inkinga ngenxa yokuthi kuningi okumele kubhekelelwe emalungeni okwengeza. Akubona bonke abaholi abasohlwini oluzohlulwa abangasadingeki esigungwini salabo abazowina. Ukuba nesigungu esibanzi kwenza nalabo abasadingeka abangadliwa yizembe babhekelelwe njengoba kwenzeka nasengqungqutheleni yasePolokwane ngo-2007 sabona abaholi abafana noJoel Netshitenze, Nkosazana Dlamini-Zuma, nabanye ababe ngaphesheya bethola izikhala esigungwini sikaZuma,” kuchaza uMncube.
Omunye umgomo obhekwe ngamehlo abomvu ngowodaba lomhlaba njengoba uhulumeni esekucacisile ukuthi uhlelo olwaziwa ngeWilling Buyer Willing Seller, aluthanga shu ekubuyiseni nasekwabiweni komhlaba ngendlela. UMncube uthi le ngqungquthela kumele iphume nesu elicacile lokubuyisela umhlaba kubantu. “UMnyango wemiHlaba usuvele usuyikhiphile iGreen Paper ngodaba lomhlaba ikakhulukazi njengoba ngonyaka ozayo umthetho wokudliwa komhlaba wabantu abansundu owashaywa nguhulumeni wobandlululo, uzobe uqeda iminyaka eyikhulu njengoba washaywa ngo-1913,” kubeka uMncube.
Phakathi kwezinye iziphakamiso okuzothathwa izinqumo ngazo singabala udaba lwezemfundo oluseqhu-lwini kuhulumeni wakuleli kanti nezindaba zakamuva ezithinta lo mkhakha zizokwenza abantu babheke ngamehlo anzulu ukuthi kuzothathwa ziphi izinqumo ngezemfundo.